रूस विश्व कप फुटबल च्याम्पियनशिप मा फुटबल अन्तिम धाउन विशेष व्यक्तिगत वा व्यवसाय यात्रा को लागि परम हावा शटल विमान भाडा सेवा बुक. यो विमानस्थल उडान पहिले नै oversubscribed छन् तर मिलान धाउन तपाईं अझै पनि एक निजी जेट बुक गर्न सक्नुहुन्छ
फीफा विश्व कप दुनिया मा नम्बर एक खेल घटना छ. म शब्द घटना भन्न, तर सबैभन्दा खराब प्रकारको एक न्यानोकीत छ. विश्व कप परम अनुपात एक extravaganza छ,र छ जसले सबैलाई त्यहाँ आफ्नो जीवन को समय भएको छ. तथापि, धेरै मानिसहरू घटना नै अचम्मको छ, जबकि यात्रा त्यहाँ केही अरू सम्पूर्ण लागि योजना छ भन्ने महसुस छैन.
तपाईं प्याक छ भन्ने तथ्यलाई बाहेक, जो गर्न कुनै एक मनपर्ने कुरा हो, तपाईं पनि यात्रा को लागि के को छनौट गर्न छ. यदि, मौकाले, तब लागि एक विकल्प ड्राइभिङ छ नै समस्या छ. ती लागि भनेर हुनत थप समस्या entail उडान गर्दै. जहाँ विमानस्थल गर्न प्राप्त पछि कार राख्न जस्तै कुराहरू, विमान हुन जाँदै मा सेवा कसरी राम्रो छ, कसरी जाम-पैक को विमानस्थलको छन्,र एक कार renting तपाईं आइपुगे गरेपछि.
यो ती सबै समस्या समाप्त किनभने विश्व कप आधार एक फिफा विश्व कप निजी जेट विमान चार्टर उडान सेवा लिइरहेको यात्रा गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका को छ. तपाईं निजी पट्टी आफ्नो कार लिन र तपाईं फिर्ता नभएसम्म यसलाई छोड्न. तपाईं सेवा हुन मात्र संरक्षक हो किनभने सेवा ठूलो छ. एक कार भाडामा लिने सामान्यतया तपाईं लागि पाङ्ग्रा हवाई मैदानको जमीन छुन समय द्वारा स्थापित छ.
यी, धेरै कारण बीचमा, तपाईं एक उड गर्न छनौट गर्नुपर्ने हो निजी चार्टर जेट गर्न फिफा विश्व कप. यो टाउको दुखाइ यसलाई सामना गर्न लायक छैनन्. अधिकांश मानिसहरू लागि जीवनकालमा अनुभव मा एक पटक विश्व कप जाँदै छ, र एक जीवनकालमा आउन को लागि सम्झना गरिनेछ. छैन स्मृति एक गाडी वा एक भयानक उडान भाडा आए कि परेशानी को होस् गर्छन्. चिन्ता र दु: खबाट मुक्त छ कि एक निजी उडान लिन.
मास्को मा निजी जेट विमानस्थलको
मास्को Vnukovo मास्को मा सबै भन्दा लोकप्रिय निजी जेट विमानस्थल छ, स्थित 30km शहर केन्द्र को दक्षिण-पश्चिम. यसको रनवे कुनै पनि आकार को निजी जेट विमान सम्हाल्न सक्नुहुन्छ र यसलाई निजी जेट ग्राहकहरु र चालक दल को लागि 24 घण्टे FBO सुविधाहरु छ.
मास्को अन्य विमानस्थल विकल्प हो मास्को Domodedovo, मास्को Sheremetyevo र मास्को Ramenskoye.
चार्टर रूस निजी जेट 2018 फिफा विश्व कप स् शहर नक्शा
को कुल 12 रूस मार्फत स् को लागि जुडनार पाहुना 2018 फिफा विश्व कप. मास्को र सेन्ट पीटर्सबर्ग मा स्टेडियमों साथै यी हुन्:
एकाटेरिनबर्ग कलिनिन्ग्राद स्टेडियम,
कलिनिन्ग्राद Mordovia एरिना,
सारान्स्क बेलग्रेड एरिना,
बेलग्रेड Otkrytiye एरिना,
मास्को Rostov एरिना,
Rostov-मा-डन कजान एरिना,
कजान Fisht ओलम्पिक स्टेडियम,
सोची Nizhny Novgorod स्टेडियम,
Nizhny Novgorod समारा एरिना,
समारा सेन्ट पीटर्सबर्ग स्टेडियम,
सेन्ट पीटर्सबर्ग Luzhniki स्टेडियम, मास्को
Boeing 737 निजी जेट एयर चार्टर सेवा
निजी जेट एयर चार्टर उडान देखि वा ओमाहा गर्न, लिंकन, ग्रान्डद्विप, पूर्वोत्तर